लगानीकर्ताको रोजाइमा परेका १० ब्रोकर कम्पनीहरु ?? | eKhabarSanjal
Home अर्थ / वाणिज्य लगानीकर्ताको रोजाइमा परेका १० ब्रोकर कम्पनीहरु ??
सेयर बजारमा भित्रने नयाँ लगानीकर्ताको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ ।
लगानी खबर, काठमाडौं – पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन थालेका छन् । सेयर बजारमा भित्रने नयाँ लगानीकर्ताको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । सेयर बजारले नयाँ इतिहास रचिसकेको छ । पछिल्लो समय सेयर बजारले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड राख्न थालेको छ ।
योसँगै लगानीकर्ताहरु सेयर बजारमा आकर्षित हुन थालेका छन् । डिम्याट एकाउन्ट खोल्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । सिडीएससिका अनुसार डिम्याट खोल्नेको संख्या ३० लाख नाघेको छ, भने सक्रिय रुपमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा आवेदन दिनेको संख्या १८ अख ४ हजार नाघेको छ । पछिल्लो समय प्राथमिक सेयरमा आवेदन दिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसबाट नै थाहा हुन्छ पछिल्लो समय नेपाली सेयर बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेका छन्।
प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ता बढेसँगै अब दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेको संख्या बढ्ने निश्चित छ । प्राथमिक सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर खाता नखोली दोश्रो बजार प्रवेश गर्न अर्थात् उक्त सेयर बिक्री मिल्दैन । जसको कारण ब्रोकर लाइसेन्स लिनेको संख्या अझै बढ्नेछ ।
यी बाहेक सेयर बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुनुको विविध कारण पनि छन् । यिनै विविध कारणहरुमध्ये एक कारण हो बढ्दो प्रविधिको विकास । प्रविधिको विकास भएसँगै सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरु बढी आकर्षित हुन थालेका हुन् । सेयर बजारमा कारोबार गर्नको लागि पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरु ब्रोकरकहाँ नै धाउनुपर्ने झन्झट दूर भएको छ । घर या अफिसमा बसेर नै लगानीकर्ताले ढुक्कले सेयर कारोबार गर्न सक्छन्।
योसँगै अनलाइन सेयर कारोबार गर्नका लागि ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) लिनेको संख्या पनि बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार दोस्रो बजारमा सक्रिय रुपमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या झन्डै ६ लाख पुगेको छ । स्टकका अनुसार ५० वटा ब्रोकर कार्यालयमार्फत संख्या ५ लाख ९४ हजार ८ सय ७९ लगानीकर्ताले सक्रिय रुपमा सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका छन् । जसमध्ये अनलाइन मार्फत कारोबार गर्नेको संख्या ४ लाख ४५ भन्दा बढी छ ।
नेप्सेका अनुसार ५० वटा ब्रोकरमध्ये सबैभन्दा धेरै सक्रिय लगानीकर्ताहरु नासा सेक्युरिटीजमा रहेका छन् । कम्पनीमा ३१ हजार १८४ जना सक्रिय लगानीकर्ता रहेको नेप्सेले जनाएको छ । जसमध्ये २१ हजार १ सय ८५ जना अनलाइनमा सक्रिय छन् ।
त्यसैगरी क्रमशः दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनीमा ३० हजार ९ सय ४ जना सक्रिय लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । यस्तै, इम्पेरीयल सेक्युरिटीज कम्पनीमा २५ हजार २ सय १४ जना, सानी सेक्युरिटिज कम्पनीमा २४ हजार १ सय १३ जना, मिडास स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमा २१ हजार ४ सय ८४ जना, अनलाइन सेक्युरिटीज २० हजार ३ सय ८५ जना, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटीजमा १९ हजार ३ सय ६३ जना, भिजन सेक्युरिटीजमा १८ हजार ८ सय ५३ जना, लिन्च स्टक मार्केट १६ हजार ४ सय ५७ जना र सुमेरु सेक्युरिटीज १५ हजार ७ सय ७२ जना सक्रिय रुपमा सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरु रहेका छन् ।
लगानीकर्ताको रोजाइमा परेका १० ब्रोकर कम्पनीहरु हेर्नुहोस्:-
Previous articleजीवन उपयोगी ज्ञान – चाणक्य
Next articleविकास तीव्र गतिमा आगाडी बढाएका छौं: प्रधानमन्त्री
दोश्रो लहर रोकथाम गर्न सरकारले गर्नुपर्ने ५ वटा काम र नागरिकले गर्नुपर्ने एउटा काम...